Olee otú Naghachi Videos si GoPro camcorder
> Resource> Video> Olee naghachi Videos si GoPro camcorder
Enwere m ike Naghachi ehichapụ Videos si GoPro camcorder?
M were ọtụtụ ịnya vidiyo na m GoPro dike 3. Ọtụtụ ụbọchị gara aga mgbe m jikotara camcorder ka kọmputa m na-agbalị nyefee videos m hụrụ na ndị nile na-agba videos e okụrede si ma GoPro camcorder na kọmputa m. Amaghị m ihe mere ma anaghị m mkpa iji nweta m videos azụ. Nwere ike onye na-agwa m otú?
GoPro camcorders ndị kasị mmasị ngwaọrụ nke njem egwuregwu ndị hụrụ. Ma dị ka ndị ọzọ dijitalụ ngwaọrụ, videos na foto na GoPro camcorder nwere ike furu efu n'ihi usoro njehie, nhichapụ, formatting, na-ezighị ezi ma ọ bụ njikwa ihe ndị ọzọ. Ozi ọma ahụ bụ na i nwere ike eleghị anya naghachi vidiyo si na GoPro camcorder dị ka ogologo oge videos adịghị e overwritten site ọhụrụ data.
Ihe ngwọta kasị mma n'ihi na ị na-agbake furu efu ma ọ bụ ehichapụ vidiyo si na GoPro camcorder bụ ịkwụsị iji ngwaọrụ ozugbo na anya n'ihi na a pụrụ ịdabere na GoPro video mgbake usoro na Internet. Wondershare Photo Recovery Ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac dị otú ahụ a mmekọ na-Recovers furu efu, ehichapụ, formatted ma ọ bụ ọbụna rụrụ arụ videos na foto gị GoPro camcorder na ala. Na 3 nzọụkwụ, nile furu efu videos na gị GoPro camcorder ga-natara dị ka mbụ.
Ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery na-amalite GoPro video mgbake ugbu a!
Naghachi Videos si GoPro camcorder na 3 Nzọụkwụ
Cheta na: Ọ bụ nnọọ mkpa ịhapụ gị GoPro camcorder naanị otu ugboro videos na-efu. Ugbu a, ka eme GoPro video mgbake na Windows version nke Wondershare Data Recovery.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode naghachi ehichapụ vidiyo si na GoPro camcorder
Mgbe wụnye na launching Wondershare Data Recovery, ị ga-3 mgbake nhọrọ naghachi gị GoPro videos.
Naghachi furu efu GoPro videos, biko họrọ "Echefuola File Iweghachite" dị ka a mbụ na-agbalị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị GoPro camcorder ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa
A nzọụkwụ, i kwesịrị jikọọ gị GoPro camcorder ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa na kọmputa gị apụ. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ mbanye akwụkwọ ozi n'ihi na ọ na mmemme window na pịa "Malite" button na-amalite ịgụ isiokwu maka furu efu videos.
Ọ bụrụ na videos na gị GoPro camcorder na-efu n'ihi formatting, ị nwere ike họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 Naghachi vidiyo si na GoPro camcorder
Mgbe scanning, ị ga-enwe ike ele mbụ aha ndị nile hụrụ faịlụ gị GoPro camcorder. Ị dị nnọọ mkpa họrọ gị furu efu videos na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha gị na kọmputa.
Cheta na: ma e wezụga na-agbake videos, foto na audio faịlụ site na gị GoPro camcorder, a usoro weghachiri ụdị faịlụ ndị ọzọ dị ka akwụkwọ, ozi ịntanetị, na Archive faịlụ maka gị onwe gị kwa.
3 Nzọụkwụ naghachi ehichapụ Videos si JVC Everio camcorder
7 ụzọ na-ekiri 4K fim na TV na-egosi
Olee otú iji tọghata VOB ka MP3
Olee otú mpikota onu Video maka YouTube
Top 10 Best AVI joiner Freeware isonyere AVI Video Files